सुख र दुःखको चक्रबाट उम्किएर कसरी आनन्दित रहने ?:: Naya Nepal
सुख र दुःखको चक्रबाट उम्किएर कसरी आनन्दित रहने ?
आज फेरि उसले दिनभरि कडा परिश्रम ग¥यो । कहिलेकाँही ढु ढुंगा बोक्ने र कहिलेका बालुवाको बोरा बोक्ने काम थियो । तर यति परिश्रम गर्दा पनि उसले १०० रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक पाएन । यो मोहनले पाउने औसत ज्याला हो । कहिले त यति पनि पैसा हुन्न । तर उसले कसरी कसरी यही पैसाले परिवारलाई दुई छाक हात मुख जोड्न पु¥याउँथ्यो त कहिलेकाहीँ खाँचोमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्न पनि पु¥याउँथ्यो । जे होस् सबै चीज कठिनाइको साथ गरिएको भए पनि, उनको कडा मेहनतको रफ्तारमा कमी आएको छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा उनी यो मेहनत र यसबाट प्राप्त पारिश्रमिकमा खुसी पनि थिए ।
एकदिन गाउँमा एक अपरिचित मान्छेको वरिपरि मान्छेको भिड देखे । उनी उत्सुकतापूर्वक भिडको बीचमा पुगे । उक्त व्यक्तिको हातमा अनेकथरीका कागज देखेर मोहनले त्यो व्यक्तिको बारेमा त्यहाँ उभिएकासँग सोधे । त्यो मान्छे चिठ्ठा भर्ने मान्छे थियो ।
मोहनले त्यही मान्छेलाई सोध्यो : तिमी को हौ भाइ, यो तिम्रो हातमा भएको के हो ?
बीचमा भएको मान्छेले भन्यो : यो चिठ्ठाको टिकट हो । यदि तपाईंले यो चिठ्ठा पार्नुभयो भने ठूलो धनराशिको पुरस्कार मिल्नेछ । त्यो व्यक्तिले मोहनलाई चिठ्ठा किन्न प्रोत्साहन गर्न थाल्यो ।
मोहनले पनि सजिलै उत्तर दियो : म साधारण कामदार, मलाई उपहारको के आवश्यकता छ ? मलाई कसले दिन्छ उपहार ?
त्यो व्यक्तिले भाग्यको भर नहुने भन्दै भाग्यको परीक्षा गर्न आग्रह ग¥यो । धेरै कर बल गरेपछि मोहनले चिट्ठा किनेर घर लगे । केही दिन बित्यो, एकदिन चिट्ठा भर्ने व्यक्ति मोहनको घरमा पुगे । मोहन घरमा थिएनन् । उनले मोहनकी श्रीमतीलाई आफ्नो परिचय दिए ।
उनले मोहनको लागि ठूलो शुभ समाचार रहेको बताए ।
शुभ समाचार के भन्ने बुझेपछि त्यति ठूलो समाचार आफ्नो पतिलाई आफैंले बताउने उल्लेख गरिन् । मोहनको नाममा ५ लाखको चिठ्ठा परेको थियो ।
त्यो समाचार सुनेपछि मोहनकी पत्नीले सोचिन् ‘आफूले एकैपटक सिधै सो समाचार सुनाउँदा पतिलाई गाह्रो हुन सक्छ भनेर मन्दिरका पुजारीलाई रकम घटाएर सो समाचार सुनाउन सुझाव दिए । पुजारीले पनि सुरुमा एक लाख मात्रै चिठ्ठा परेको सुनाउने निधो गरे ।
साँझ पति घर आए । श्रीमती एकदमै प्रफुल्लित थिए । मोहन आएको थाहा पाएपछि पुजारी पनि घरमा आए । मोहनले पुजारीलाई घरमा आउनुको कारण विनम्रपूर्वक सोधे । पुजारीले पनि सबै प्रक्रिया पु¥याएर मोहनलाई एक लाखको चिठ्ठा परेको सुनाए । पुजारीलाई मोहन खुसीले सम्हालिन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्तामा थिए । जसो तसो उनले एक लाख रुपैयाँ चिठ्ठा परेको सुनाए । मोहनले पनि हाकाहाकी एक लाखको चिठ्ठा परेको भए ५० हजार रुपैयाँ मन्दिरमा दान गर्ने सुनाए ।
अहिले पाँच, १० रुपैयाँको भेटी संकलन गरेर बसेको पुजारी एकैपटक ५० हजारको दक्षिणाको कुरा सुनेर बेहोस भए । अन्ततः उनको निधन नै भयो ।
कथाको आध्यात्मिक मूल्याङकन
यो कथाको मूल सार भनेको सम्पत्तिले सुख किन्न सक्ला तर खुसी किन्न सक्दैन । जीवनमा सुख र दुःख आउँछन् र जान्छन् । सुख क्षणिक हुन्छ भने दुःख पनि क्षणिक नै हुन्छ । मान्छेको चाहना एक ठाउँमा हुन्छ तर अनावश्यक चाहनाले नै मान्छेलाई दुःखी बनाउँछ ।
यही कथामा पनि मोहनलाई एक लाख यत्तिकै आउँदा पनि महत्वाकांक्षा र अनावश्यक उत्तेजना मनमा छाएन । हामीलाई ऋषिमुनिहरूले सिकाएको ज्ञान नै जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भइयो भने कहिलै पनि दुःखी भइँदैन भन्ने हो ।
सुख र दुःख दुवै हाम्रो दिमागबाट उत्पन्न हुन्छ । केवल परिस्थिति बाहिरबाट आउने हो । जब हाम्रो दिमाग परिस्थितिले दुःख र सुखको छिनोफानो गर्छ त्यसपछि हामी दुः खी हुन्छौं । त्यो पस्थितिलाई हामीले सुखद् हिसाबले लियौं भने त्यसले हामीलाई खुसी हुन उत्प्रेरित गर्छ ।
दुवै अवस्थामा यदि हामीले संसारबाट आफूलाई अलग सोचेर व्यवहार ग¥यौं भने अनन्त आनन्दसँग हामी जोडिन पुग्छौं । त्यसले खुसी वा दुःख महसुस गर्न थाल्छौं । जीवनमा खुसी वा दुःख छ तर हामी तिनीहरूबाट प्रभावित हुँदैनौं । यहाँबाट एकले असीम सन्तुष्टि र शान्तिको अनुभव गराउने गर्छ ।
प्रस्तुत कथामा मोहन पनि त्यस्तै अवस्थामा रहेको देखिन्छ । ऊ आफ्नो जीवनमा पैसाको अभावमा पनि सन्तुष्ट थियो र पैसा आउँदा पनि उसको इच्छाबाट स्वतन्त्र थियो । दुःख र खुसीले उसको दिमागमा कुनै प्रभाव पारेन ।
सरकारलाई वार्ता सुरु गर्न ४ बजेसम्मको अल्टिमेटम, नभए कडा आन्दोलन
अनसनरत् डा. गोविन्द केसी सोलिडारिटी एलाइन्सले आज शुक्रबार बेलुका ४ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीले गोविन्द केसीका प्रतिनिधिलाई वार्तामा नबोलाए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केसीका माग र उनको बिग्रदो स्वास्थ्यप्रति गम्भीरता नदेखाएको भन्दै आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले सत्याग्रहीलाई मृत्युसैयमा छाडेर बार्ता बिलम्ब गराइरहेका छन। हाम्रो धैर्यताको बाँध अब टूटने अवस्थामा छ,’ सो एलायन्सले भनेको छ, ‘बेलुका ४ बजे सम्ममा बार्तामा नबोलाईए थप आन्दोलन चर्काउने छौै।’
उनीहरुले डा केसीको जीवन तलमाथि भएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकार हुने जनाएको छ।
शुक्रबार बिहानै सुरु हुने भनिएको सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिबीचको वार्ता दिउँसो दिउँसोसम्म पनि सुरु हुन नसकेकोपछि उनीहरुले अल्टिमेटम दिएका हुन्।
डा. केसीका प्रतिनिधिहरुले सरकारी टोलीले ढिलाइ गर्दा वार्ता हुन नसकेको बताएका छन्।
बिहीबार एकखालको सहमति गरेर थप छलफलपछि पुनः शुक्रबार वार्तामा बस्ने भनिएको भए पनि अहिलेसम्म वार्ता सुरु हुन नसकेको डा. केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीमा रहेका ओमप्रकाश अर्यालले बताए।
उनले सरकारी टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफलका लागि समय नपाएको बताए। उनले सत्याग्रह २६ औँ दिनमा पुग्दा र डा. केसी मृत्युशय्यामा पुग्दा समेत प्रधानमन्त्री संवेदनशील नभएको आरोप लगाए।
बलिउड छोडेकी सना खानले ट्वीटरबाट डिलिट गरिन् आफ्नो सबै हट फोटो, अब देखिन्छिन् हिजाबमा मात्रै